Noocyada USB Flash Drive
All u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan noocyada kala duwan ee USB Flash eryi
Bilaabidda: Waa maxay Flash Drive?
Flash A waa qalab loo isticmaali karo si loo badbaadiyo macluumaadka u yar, qori xasuusta flash ah. Waxaa la akhrisan kartaa oo qoraal ah. Storage devices ayaa la sheegay loogu talagalay in ka yar a kaydinta disk caadiga ah, iyadoo qaar ka mid ah iyagoo size ee suulka ah. Taasi waa sababta dadka qaar ay u ogaadaan sida qalinka-drives, halka qaar kalena ay door bidaan inay u yeedhaan "drives suulka."
Wax kasta oo magaca, ayay wax walba ka qayb hal sifo oo iyaga waa la khali kartaa ilaa la kombiyuutar kasta, si ay universal baska taxanaha (USB) waafaqsan dekedda mahad.
Halkan, waxaan u gudbo noocyada kala duwan ee USB flash drives. Hal dhibic oo ah in la ogaado waa in iyaga la tilmaami karo sida uu isticmaalo ay, ama sida ay astaamaha jireed. Waxaan isku dayaan in ay miisaamaan dhexeeya labada.
Qoondayntani Sida laga soo xigtay isticmaalo
Ammaanka Flash Drive
Tani waa qalab flash USB kaydinta caadi ah maroojin weyn marka la eego tallaabooyinka loo qaaday si loo ilaaliyo xogta. Waxaa la wada deyran yihiin tallaabooyinka nabadgelyo iyo / ama macquul ah si loo hubiyo in xogta aan gudanin. Tusaale ahaan waa flash ka Cryptex, taas oo uu leeyahay qufulka isku jira ka hor inta aad heli kartaa disk USB gundhig gudahood ah. Kuwanna waa kuwii ka IronKey, taas oo la timid hab gudaha ah (sida ilaalinta sirta ah iyo sirta ammaanka daray). All oo dhan, qalabka kuwanu waxay ka iman la ammaanka daray ilaalinta xogta.
Tani waa flash ah in loo isticmaali karaa si loo badbaadiyo ama music ka mid qalab wareejiyo kale. Waxaa laga yaabaa in naqshado sheeegateen oo kala duwan, sida kan oo ka garab weerar. Si kastaba ha ahaatee, inta badan oo iyaga ka mid ah waxaa loogu talagalay in lagu hubeeyo, in size, si kor loogu qaado karo. Sababta tani waa in dadka intooda badan kuwaas oo doonaya inay qaadaan files ay music dheeraad ah oo ku xeeran ee drive flash ah ayaa raba in ay noqdaan meel laga gaadhi karo, isagoo jidka ayaa looga tuuraa.
A flash boot waa uun usha xasuusta USB caadi ah oo uu soo karti u heelan nidaam hawlgalka ah. Geedi socodka ee daahirinta aalad lagu kaydiyo dibadda si ay ugu adeegaan ujeedadaas oo la sheegay in "samaynta Downlaods." Computer ah in aan bilaabi doonaa, maxaa yeelay nidaam hawlgalka maqan Mar kasta oo aad qabto, si fudud u heli a flash drive boot in kiciyo kombuyuutarka. Haddii aanad haysan mid ka mid hadda, waxa aad u hesho sababo heegan.
Qoondayntani Sida ay indhohooda
Card Credit Hard Drive
Sida magacaba ka muuqata, tani waa flash drive USB ah oo uu soo kartoo si ay u eegaan sida credit card. Qaar ka mid ah xitaa waxaa lagu sii talo galay karaan si ay u fuliyaan tag magaca milkiilaha, iyo sidoo kale dhowr ah oo ku habboon been abuur credit card. Dadka leeyihiin sababo kala duwan ku dhaco sida flash ah laakiin mid sheey aan hubo, in aad marnaba mar kale illoobi doonaa guriga, tan iyo markii aad geli karaan nalastiko galay jeebka ah.
USB Chain Key- Flash Drive
Ma jiraan wax sheeegateen oo ku saabsan flash taas, marka laga reebo xaqiiqada ah in waxa loo qoondeeyey in lagu qaaday ku dhawaad ​​in ka silsilad caadiga ah ee muhiimka ah waa. Si kastaba ha ahaatee, tan micnaheedu ma aha in uu overrated sinaba. Taas lidkeeda, waxaa iman kartaa haan ee loogu talagalay dadka illooba, waxaana lagu badiyay cajaladaha flash ay si joogto ah.
Tan iyo markii ay si qurux badan loogu tala galay, waxaad ka iibsan kartaa mid ka mid ah ornate (si looga fogaado dhibaato guud ee raadinaya beryihii hore ee), in lagu daro in furaha gaariga.
Xadhigga Flash Drive
Ma jiraan wax badan oo in la yidhaahdo oo ku saabsan flash taas, runtii, maadaama ay tahay oo dhan magaca waa. Waxaa laga yaabaa inaad ku dari karaysaa xaqiiqda ah in uu noqon karaa mid aan biyuhu - sidaa waa in aad u qaadato tiixo. Wax kale oo aan ahayn, waxa ay u muuqataa "tres" The Sun.!
USB ku tilmaamay Flash Drive
Haddii aad tahay taageere u dhinta-adag Dhuxul ah, waxaa laga yaabaa in waqti ay ku muujiyaan jacaylka aad in ay magaceeda by helitaanka USB disk tilmaamay. Macno ahaan waxaa jira tan oo qalabka lagu kaydiyo USB, kuwaas oo halkaas, oo sugaya in aad u ogaado. Halkan tijaabo.
"-Beeneyda Head" Qalabka USB
Haddii aad qabto lafta lagu qoslo, waa kuwan qaar ka mid ah siticmaalaan aad rabto in aad hesho qurxinta miiska aad shaqada. Waxay yihiin caagagga Ghadafi ee tirooyinka loo jecel yahay, sida ciyaartoyda kubadda cagta ama xiddigaha movie. Iyada oo ku xidhan aad door bidayso, waxa aad dooran kartaa doorashooyin kala duwan la heli karo halkaas.
Waxaa jira design xad-dhaaf ah USB flash drives halkaas. Kuwaas waxaa lagu tilmaami karo iyada oo la isticmaalayo, shaqeynta ama xitaa heerka sirta ammaanka. Sida dadkii badnaa u soo guuro daruurtii kaydinta, waxaad ka heli kartaa flash shakhsi gaar ah offline isticmaalo. Waxaa la joogaa waqtigii in ay ka guuraan aagaaga raaxada iyo bilowdo gudboonaato naqshado kala duwan.
Sidee loo badbaadiyo Vital Files From a kharribeen Flash Drive
> Resource > Flash Drive > All aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan noocyada kala duwan ee USB Flash Drive